Posted on December 26, 2019 December 24, 2019 by mysansar
5 thoughts on “बाउआमा मरेपछि अंश लिन मात्र नेपाल जाने”
मसाज सेंटर मा ५ हजार डलर कमाउने तेस्तो के काम हुदो रहेछ जानन मन लाग्यो!!!
केही व्यक्ति विशेषलाई लिएर आम नेपालीहरु अमेरिका आएपछी कसरी आफ्नो धरातल विर्सिन्छन् भनेर समग्ररुपम चारित्रिकरण गर्नु सारै निन्दनीय छ । यो सिवाय अहँरुपी खोक्रो आदर्श भन्दा बढी केही पनि हैन । लेखकलाई बिगत २० वर्षमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक रुपान्तरणको ज्ञान कमी भएको जस्तो लाग्यो । शायद त्यसैले होला पारिवारबाट अपहेलित, निष्काशित र मारिनुबाट बाँची बृद्धाश्रममा आश्रित हुनपुगेकाहरुको भन्दा अमेरिकाका केहि अपवादहरु लेखकका लागि महत्वपूर्ण कथा बन्न गयो । लेखले पनि आफ्नो धरातल भन्दा माथि उठेर समस्याको जड के हुन सक्छ त्यसमा लेख्न सके राम्रो हुन्थ्यो कि ।
डा. बाबुराम भट्टराइद्वारा लिखित “नेपाली अर्थतन्त्रको आँखिझ्याल” नामको पुस्तक दुइ दशक भन्दा अघि नै पढेको थिएं । धेरै कुरा विर्सि पनि सकें, सायद पुस्तकको नाम पनि ठ्याक्क नमिलेको पनि हुनसक्छ । यस्तै केही थियो नाम ।
त्यसलमा लेखकले नेपालका महिलाहरू उत्पिडित हुनुको कारणमा कमाइको स्वामित्व विषयलाइ प्रमुख कारण उल्लेख गरेका छन् । वितेका दुइ दशकमा नेपाली समाज (खास गरी मध्यम वर्ग) विकसित देशको कमाइमा र देश रेमिट्यान्सबाट धानिन थालेपछिको वास्तविकतालाइ यो कथाले उजागर गरेको छ र यो विषय वस्तु यथार्थ परक नै छ ।
डा. भट्टराइको त्यो विष्लेशण पुरै सही हो कि नेपालको मौलिक संस्कृति नै उत्तम हो भन्ने विषयमा म त्यसवेला भ्रमित थिएं । अहिलेको सामाजिक स्वरूपलाइ हेर्दा उनको विष्लेशण सत प्रतिशत ठीक रहेछ र नेपालमा हैकम चलिरहेको पुरूष समाजको भित्री रूप महिला शोषण मै निहित छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । उत्पिडन सहने बानी परेका महिलाहरू मेलापात गरेर घर धान्ने र पुरूषहरू चौतारामा बसेर तार खेल्ने अनि चिया पसलमा गफ गर्ने, साँझमा भट्टीबाट हल्ला गर्दै घर फर्कने गर्थे । अहिले महिलाहरू विदेशमा पुगेर आफ्नै कमाइमा बाच्न पाउँदा नैतिकताको दाम्लो छिनाल्ने प्रबृत्ति र नेपालमा पुरूषले गर्ने शोषण दुवै गलत हुन । यस्ता प्रबृत्ति सुधार गर्न सके राम्रो त हुन्छ तर नेपालमा उत्पिडन सहिरहन बानी परेका महिलाहरूको यथास्थिति भने अन्यायपूर्ण नै छ ।
यो कथा बस्तु पुरूष नजर(कोण) बाट लेखिएको छ । यस्तै कथा बस्तु महिला नजर (पक्ष)बाट पनि पढ्न पाए भविष्यको मार्ग अलि राम्रो पनि देखिन सक्छ । बर्तमान त यस्तै भैरहेकै छ ।
गाउको पाखे एक्कै पटक सहर आएर सहर को बखान गर्या जस्तो भो !! बिदेशमा पनि बाउ आमा सासु ससुरा इस्ट मित्र मान्ने र धान्ने अनि पुरुस भन्दा धेरै कमाउने महिला पनि हुन्चन – एक दुइ जना त नेपाल मै पनि बिग्रेका हुन्चन !!
थाहा छ मा कति कमाउँछु भनेर ,महिनाको ५०००, नेपाली होइन डलर बाबु , अमेरिकी डलर। यहाँको नाम चलेको मसाज सेन्टर मेरो मितिनीको हो, उनको मै काम गर्छु म। घण्टाको ५० डलर हुन्छ , टिप्स अलग्गै , हफ्ता को ३० घण्टा गर्दा पनि काफी हुन्छ मलाई। ……….. माथिको यत्ति कुराले थाहा भयो कि यो सबै एउटा कथा मात्र हो, मन गडन्ते कथा। घण्टा को $५० को दरले हप्ताको ३० घण्टा मात्रै काम गरे पनि $१५०० हुन्छ अनि महिनाको $६०००। अझै ४० घण्टा भयो भने त $८००० हुन्छ + टिप्स $२००० मात्र हिसाब गरेपनि कम्तिमा पनि $८००० हुन आउछ। तर कथाको पात्रको कमाइ जम्मा ५००० मात्र छ। नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ। येस्ता घटनाहरु नहुने होइन विदेशमा, अनि नेपालमा पनि हुन्छ तर घटनालाई रोचक बनाउन अत्ति बधाई चढाई चाही नगरौ न हो धोति नै फुस्कने गरि…….